Laacibiinta Juventus oo la sheegay inay Cardiff ku murmeen & Bonucci oo beeniyay! – Gool FM
Laacibiinta Juventus oo la sheegay inay Cardiff ku murmeen & Bonucci oo beeniyay!
Raage June 20, 2017
(Torino) 20 Juunyo 2017 – Warar soo baxaya ayaa sheegaya inay murmeen laacibiinta Juventus markii lagu jirey kaambiyada ciyaartii dhamaadka Champions League ee ay 4-1 ku bahdishey Real Madrid.
Kooxda Bianconeri ayaa gelinkii hore firfircoonayd, balse waxaa lakala direy kaambiyadii dambe, haatan, La Stampa ayaa werinaya in ay dood kululi dhexmartay laacibiinta gaar ahaan mid uu kiciyay Leonardo Bonucci.
Wargayska ayaa sheegaya in daafacani uu Paulo Dybala canaantay iyadoo xitaa la sheegayo inuu dharbaaxay isagoo u sheegay inuu kaligii isla ciyaarayo, isagoo weliba ula hadlaya si aan qurxoonayn, Bonucci ayaa sidoo kale laye wuxuu sheegay inuu Marcelo jabsady dadabka bidix, halkaasoo uu ku aaddanaa dadabka midig ee Andrea Barzagli.
Barzagli oo aan warkaa jeclaysanin ayaa Bonucci u sheegay in uu isaguba haddii uu naf is gelin lahaa uusan dhsheen goolka Cristiano Ronaldo oo markaa ciyaarta 1-0 ka dhigayay.
Bonnucci ayaa qoraal uu Facebook soo dhigay ku beeniyay wararkan isagoo leh: “Marka la eego waxyaabihii la qoray maalmihii tegey ee ku saabsanaa inaan murannay aniga iyo laacibiin kale, waxba ka run maaha.”
Juventus oo booska Dani Alves ku daarinaysa dadabka De Sciglio
Roma & Milan oo wada raacdaynaya Rachid Ghezzal